Dib u eegista iyo rakibidda LMDE 201108 RC | Laga soo bilaabo Linux
Dib u eegista iyo rakibida LMDE 201108 RC
Maalmo ka hor markii la bilaabay LMDE 201108 RC in baloogga Linux Mint labadaba Gnome, sida Xfce In kasta oo aysan jirin warar badan oo runti ah, haddana waxaan ku tusi doonaa adiga oo tallaabo tallaabo ah habka rakibaadda iyo qaar ka mid ah astaamaha ay ka mid yihiin.
Aynu ku bilowno rakibaadda. Habka aan doortay wuxuu ahaa inaan ka abuuro CD rakibidda xusuusta Flash aaladda Unetbootin. Markaan nidaamka ku shubno aaladda USB, wax la mid ah sawirka bilaabaya qodobkaan waa inuu soo baxaa. Ma doonayo inaan sharaxaad ka bixiyo talaabooyinkan maxaa yeelay horaan u aragnay horay.
Marka aan gujino astaanta Ku rakib Linux Mint Waxaan helnaa mid ka mid ah astaamaha cusub ee uu RC kan Gnome: Rakibis waxoogaa muuqaal ah oo dib loo hagaajiyey.
Dabcan talaabada ugu horeysa maahan mid kale oo aan ahayn xulashada luuqadeena, taas oo lamid ah nidaamka uu adeegsan doono. Aniga ayaa iska dhaafa asal ahaan (af Ingiriis) maxaa yeelay waa sida aan u isticmaalo nidaamkeyga.
Goor dambe waa inaan doorannaa meesha aan ku nool nahay. Tani waxay naga caawin doontaa goobaha, jadwalka iyo asalka meelaha keydka ee qeybinta qaar.
Waa inaan doorannaa qaabka kumbuyuutarka. Miinadaydu waxay ku qoran tahay Ingiriis (waan ku aqaan magaca 😛 furayaasha) markaa waa midka aan ugu isticmaalo is-beddelka International furayaasha dhintay si aad u awoodo inaad isticmaasho ñ (AltGr + n) iyo lahjadaha.
Tallaabada xigta ee aanan waligey horay u arag, markaa waxaan u maleynayaa inay ka mid tahay xoojinta rakibayaasha. Sida aan uga soo rakibayay xusuusta flash-ka, rakibayaashu waxay i weydiinayaan diskiga aan doonayo inaan ku rakibo.
Dabcan waxaan doortay darawalka adag, oo noo keenaya tallaabada xigta: Abaabulaan qoruhu.
Horay ayaan u kala qeybsanaantayda la abuuray markaa waa inaan mar kale dejiyo. Kuwa aan aqoon, kaliya dooro qaybta aan u qoondeynayno oo guji midig, waxaan dooran karnaa xulashooyinka / o / guriga.
Goor dambe ayaanu habayn doonnaa magaca isticmaalaha, lambarka sirta ah iyo magaca kooxda. Ma jiraan wax murugsan, sax?
Marka talaabadani dhamaato, waxay na weydiin doontaa inaan rakibno Grub. Had iyo jeer waxaa lagula talinayaa inaad rakibto GRUB, maxaa yeelay waxay noo oggolaan doontaa inaan dooranno oo keliya kernel-ka si aan u isticmaalno, laakiin sidoo kale u galno habka aan lagu guuleysan karin.
Hadda waxay na weydiin doontaa inaan xaqiijino xogta aan horey u qornay si aan u bilowno rakibidda.
Waxaan riixnaa badhanka Ku rakib wuxuuna bilaabaa hawsha rakibida oo aan ka badnaan 5 daqiiqo.
Ugu dambayntiina haddii wax waliba si fiican u socdaan, waxaan dib u bilaabi karnaa kombuyuutarka oo waxaan ku marin karnaa nidaamkeenna cusub ee rakibay.
Ku saabsan tan RC wax badan oo lagu biirinayo ma jiraan. LMDE waxay na siineysaa wax badan oo la mid ah wixii ay innoogu habeysay. Distro leh falsafad (ama ujeeddo) ah Sii deynta Rolling, oo ku saleysan Debian, taas oo siinaysa iftiin la yaab leh marka la barbar dhigo walaasheed oo ku saleysan Ubuntu.
Xaaladdan oo kale Software beddelka kaliya ee khuseeya ayaa ahaa bedelida Qaxotiga by Banshee wax aanan jeclayn ama aan necbahay. Sidoo kale hadda ku dar meelaha lagu keydiyo ee Buoni halkii kuwa Debian, oo runtii aanan fahmin. Sidee bay u sii haysan doonaan xirmooyin aad u tiro badan? Haddii ay dhacdo in qof u baahdo inuu isticmaalo meelahan keydka ah, oo loo maleynayo inay amaan ahaanayaan, waxaan uga tagayaa khadadka si aan faylka u geliyo /etc/apt/sources.list.
# Meelaha keydka ah ee loo yaqaan 'Mint repositories deb' http://debian.linuxmint.com/latest tijaabinta ugu weyn waxay gacan ka geystaan ​​deyn aan bilaash ahayn .org tijaabinta ugu weyn ee aan lacag la'aanta ahayn
Sikastaba, wax ka baxsan tan wax walbaa waa caadi: Min-X waa dulucda gtk iyo Astaamaha, codsiyo isku mid ah iyo dhammaan faa'iidooyinka aan ka ognahay tan 'distro'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Dib u eegista iyo rakibida LMDE 201108 RC
Waxaan su'aal ka qabaa distoorkan. Miyuu sanduuqa ka baxay mise maya?
Maxaad uga jeeddaa? 😕 Ereyga Sanduuqa Ka Baxsan khalad ma ihi.
The Out Of The Box waa kuwa bixiya wax kasta oo la qabtay, nidaamyada sida Apple, Mandriva, Linux Mint caadi….
Runtii weligay intaas ma akhrin ...
Waan fahmay waxaad ujeedo. Sidii aan sheegayey, aniga iguma caddayn fikraddaTaasi waa sababta aan kuu weydiiyay, bal inaad eegto inaan isla wax ka hadlayno iyo in kale. Sikastaba, ka fiirinta aragtida Nidaamka ku siinaya wax walba oo la qabtay, waa hagaag, haa, LMDE wuu ka baxsan yahay Sanduuqa.
Waad ku mahadsan tahay maqaalka, waxaan doonayay inaan arko kala duwanaanshaha ay ku jiraan rakibida. Waa in la ogaadaa in mid ka mid ah faa'iidooyinka LMDE ay tahay in la sii daayo, laakiin muuqaal la cusbooneysiiyay ayaa seegay qalab cusub maxaa yeelay haddii kale cusbooneysiintu waxay noqoneysaa mid caajis badan.
Marka labaad, ee ku saabsan meelaha loo yaqaan 'Mint', waxaan fahamsanahay inay ahayd isbeddel lama huraan ah in horay loo sameeyo, maxaa yeelay meelaha lagu baaro Debian mararka qaarkood waxay sababaan dhibaatooyin, tan waxaa lagu daray isbeddelada ku saabsan mint-update Uguyaraan aniga, waxaan sameeyay isbadalka keydadka waqti hore wax walbana wey fiicnaanayaan. (Halkan tixraaca http://blog.linuxmint.com/?p=1781 )
Salaan iyo mahadsanid Blog-ka, si wanaagsan ayuu u socdaa aadna wuu u faa'iiday.
cusbooneysiintu waxay noqoneysaa mid caajis badan.
Uma aanan isticmaalin tan 'distro' laakiin ma sahlana sida sameynta cusbooneysiinta-helitaanka ama cusbooneysiinta aqoonta? Waxaan weydiinayaa
Waxaan isticmaalaa mashiin rogaya oo cusbooneysiintu ma aha wax aan ku qoro guriga
Dhibaatada Geesinimadu waa, tii hore markii aad rakibtay oo ay ahayd waqtigii la cusboonaysiin lahaa, waxay ahayd inaad soo degsato xirmooyin badan, 1GB ama ka badan. Kuwa leh bandwidth wanaagsan dhib ma ahan, laakiin nasiib wanaag inta kale, hadda cusbooneysiintu way ka yartahay.
Waad ku mahadsantahay Carlos markale inuu joojiyo.
Waa run waxa aad dhahdo, sawir yar oo casriyeysan ayaa loo baahday maxaa yeelay kii ugu horreeyay ee ay soo saareen, waxaa lagama maarmaan noqotay in la cusbooneysiiyo wax ka badan 1 Gb oo xirmooyin ah. Hadda waxaan rajaynayaa inay na siinayaan cusbooneysiin ku saabsan .iso waxoogaa marar badan ah. Wixii ku saabsan bakhaarrada, waan fahamsanahay waxaad leedahay, waana fahamsanahay go'aanka Mint, laakiin dhibaatadu waxay tahay, shaqadayda oo ay ugu wacan tahay isku xirnaanta gaabiska ah, ma awoodi karno inaan si toos ah uga cusboonaysiino internetka. Waxaan ka dhigeynaa khabiir ku takhasusay baaritaanka Debian iyo Tuujinta taas oo horeyba ugu filneyd, si loo sameeyo «ku dhowaad isku mid ah» kaliya LMDE Uma maleynayo inay macquul tahay 🙁
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loogu rakibo distoorkan kombiyuutarka kumbuyuutarka daaqadaha xp? Taasi waa, in la helo labada nidaam ee isla diskka adag, maadaama aan xiiseynayo LMDE laakiin ma tahriibi karo gabi ahaanba, maadaama aan isticmaalo tifaftireyaal badan oo fiidiyoow ah (dareere, vegas, iwm.) Mana aanan awoodin inaan sameeyo ku shaqee gnu / Linux.
Waxaan u maleynayaa in waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso (laga bilaabo Windows) ay tahay abuurista qayb si loo rakibo LMDE. Markaad haysato, markaa waxaad sii wadi doontaa inaad ku rakibto qaybtaas. Dabcan, ma leedahay aqoon ku saabsan kala-guurka GNU / Linux?
Waxaan ka fahmay wax ku saabsan kala qaybinta GNU / Linux iyo waxa aanan fahmin inay awood u yeesheen inay si fiican iigu sharraxaan bogag kala duwan, fagaareyaal, iwm. Marka, haddii wax igu adkaadaan, waxaan ku weydiin doonaa hubaal. Ah, waad ku mahadsan tahay ka jawaabista su'aashayda waxyar!
Waa lagusoo dhaweynayaa saaxiib. Waxaan rajeynayaa inay wax walba sifiican ula socdaan rakibidaada 😀
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku dhajiyo distoorkaan kumbuyuutarkayga laakiin shaki ayaan ka qabaa GRUB maxaa yeelay waxay dhacdaa inaan ku haysto Linux kale mashiinkeyga waxayna isticmaalaan GRU2. Miyaad cadeyn kartaa qodobkaan fadlan. Haddii aan xallin karo ama aad ii sheegi karto sida loo sameeyo, waxaa iga go'an inaan rakibo. Mahadsanid.
Hagaag, LMDE waxay isticmaashaa Grub2 marka anigu ma arko dhibaatada jirta. Xaqiiqdii, distoorkii ugu dambeeyay ee aad rakibtay waa inuu awoodaa inuu ogaado dhammaan kuwa kale ee lagu rakibay Grub. Taasi waa su’aashaadii?
Waad ku mahadsantahay jawaabtaada elav. Marka shakigeyga la cadeeyo, waxaan usii gudbi doonaa dhamaadka usbuuca soo socda rakibida qeybinta tan iyo markii aan heli doono waqti dheeri ah oo aan ku sameeyo maxaa yeelay waxaan aqriyay inay tahay nidaam aad u fiican oo hawlgal ah. Waxaan horeyba uheystey DVD rakibida oo aan rakibo. By the way and just out of curios: Tijaabinta DVD rakibida iyo furitaanka liiska ilaha Waxaan xaqiijinayaa in liiska meelaha keydku aanu la mid ahayn sida aad ku muujisay boostadan. Waxaa jira afar waxayna kala yihiin:
-deb http: // packages.linuxmint.com/debian import upstream main
-dib http://debian.linuxmint.com/lates Tijaabada ugu weyn ee tijaabada ah waa bilaash
-dib http://security.debian.org/testing/update tabarucaadka ugu weyni waa bilaash
-dib http://www.debian-multimedia.orgtesting ugu weyn oo aan lacag la'aan ahayn
Aniga ayay igu dhacdaa haddii aan ku daro daabacaadda waa inaan rakibaa bakhaar cusub.
Waxaan isticmaalaa LMDE, uma dhib badna sida Arch laakiin waxay leedahay waxyaabo yar yar, maahan wax walba mid casaan ah, aan aragno
-Openshot, blender, iyo codsi kale ayaa ku siinaya dhibaatooyin baakado jaban, taas oo ah, ku-tiirsanaan aysan kaligeed xallin karin.
- Nooca ardor, hydrogen iyo qaar kale waa noocyo tijaabiyayaal ah, taasi waa in la yiraahdo waxay rabaan inay ka fiicnaadaan waxa ay rabaan (dareenkaas waan fahamsanahay maadaama ay yihiin noocyada barnaamijyada), laakiin waa inay ku siisaa ikhtiyaarka si loo rakibo nooca xasilloon ee ka mid ah.
RT 3 kernel wuxuu siiyaa dhibaatooyin badan, gaar ahaan plymouth + hibernate, wax walbo waxay ahaayeen in la dhigo nirig defaullt iyo dhibaatooyin macsalaameyn ah, iyadoo 1TB banaanka HD aan ku reebay argagaxa kernel, xitaa waan u qaabeeyay ex4 laakiin wax waliba sidii hore ayey ahaayeen
Sikastaba, dib udajinno badan kadib, isku darka dhowr meelood, iyo xoogaa gaffe mid kale, aakhirka dadaalkeyga oo dhan waa la bixiyay, hada waxaan si farxad leh u isticmaalaa LMDE oo ay si wanaagsan u qaabeysay Jackd iyada oo aan lahayn Xruns, oo loo sii waday pulseaudio, oo leh OpenShot iyo kuwa kale oo rakibay laakiin Appmenu-tilmaamuhu uma muuqdo inuu ku jiro meelaha wax lagu keydiyo (ubuntu globalmenu), oo haddii aad ka rakibto keydadkiisa, GDM wuu guuldareystay, ugu dambeyn waxaan rakibay 'Globalmenu' caadiga ah in kastoo uusan la midoobin dhammaan APPS, laakiin waa u shaqeeyaa xasilloon, illaa aan ka maareeyo rakibidda 'Appmenu-indicator' xaaladaha xD
Laakiin qaybinta lafteedu way fiicantahay in kastoo aanan kugula talinaynin dadka cusub maxaa yeelay xirmooyinka jaban, way waalan karaan, laakiin sidaan horay u sheegay way ka fududdahay Arch Linux
Soo dhawow David:
Marnaba iskuma dayin inaan rakibo Blender iyo baakado la mid ah sidaa darteed wax badan kama sheegi karo taas. Tan iyo markii aan ku haysto LightDM meelaha keydka ah ee Debian, anigu ma isticmaalo GDM gabi ahaanba iyo tilmaamaha barnaamijka-menu ee LMDE iyo Debian uma wanaagsana sida kan Ubuntu, waana sababta aysan u soo bandhigin dhammaan codsiyada.
Haye, waxaan haystaa 2 80GB darawal adag oo waxaan rakibay LMDE. Waxaan rabaa LMDE iyo wax kale, laakiin rakibayaashu iima oggolaan doonaan inaan isticmaalo 2-da adag ee adag, waa inaan mid doortaa. Haddana waxaan ku haystaa LMDE hal disk iyo kan kale oo aanan isticmaali karin, waxaan ugu qaabeeyay etx4 laakiin markii aan doonayay inaan nuqulo feylasha diskiga, ma helin fursad aan ku dhajiyo. Waxa kale oo ay i weydiineysaa erayga sirta ah markasta oo aan ku dhajiyo. Iyo waxa aan doonayo waa in lagu daro nidaamka qalliinka, kaas oo aqoonsan 2 wadaad gebi ahaantiis. Aad baad u mahadsantahay
Ku jawaab fixu
Waxa Thunar waligiis aan helin
Qeybinta ugufiican ee Linux Linux